China mara mma square okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ silicone ụfụfụ roba gasket maka akara rụpụta na Factory | Jujie
Faiba glaasi braided sooks
Foamed silicone roba
Kpụrụ silicone ngwaahịa
Silicone spliced ​​akara mgbaaka
Silicone nrapado akara teepu
Silicone na-ejide onwe ya na teepu
mara mma square okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ silicone ụfụfụ roba gasket maka akara
acha ọbara ọbara, acha anụnụ anụnụ, ọcha, nwa, odo, ect
ọkọlọtọ size / nonstandard
ibo ụzọ na Windows, igwe, ect
Nkọwa ngwaahịa nke ụfụfụ silicone
Mgbe ị chọrọ akwa arụmọrụ na-asụ ụfụfụ silicone roba ngwaahịa, tụkwasị obi na àgwà na ọkachamara anyị na-egosipụta ebe a na alibaba. Inogide na-agbanwe. Na-ejide ma oke oke ma okpomọkụ dị ala. Anaghị eduzi ọkụ eletrik. Ebe a na Jujie, anyị honed anyị n'ichepụta usoro izu okè chee a àgwà ngwaahịa anyị ji n'aka na ị ga-enwe afọ ojuju na. Anyị na-ezute ISO 9001: ụkpụrụ 2015. Anyị na-enye nhọrọ ịzụta oge niile yana nhọrọ ịzụ ahịa zuru oke.
Ọnọdụ okpomọkụ: -40 ℃ - 200 ℃
Emeela ya ka ọ rụọ ọrụ ọ bụla, enweghị nsi, ezigbo ihe na-ekpo ọkụ, na-eguzogide nká, ọ nwere ike iburu 200 ℃ nnukwu okpomọkụ na nnukwu ọkụ.
Ọ dị mma n'anya, dị nro ma na-agbanwe agbanwe.
Adabara kabinet, ụgbọala, akpa, spraying, friji, mma, ibo ụzọ na Windows, ígwè. Enwere ike ịhazi ihe dị elu n'ime tubes ma mepụta dịka ọkọlọtọ.
Njupụta nke ihe dị 0,8, ngwa ngwa rebound, ala thermal conductivity.
Nwere ike ibipụta gị logo na ya na akara, na ndị ọzọ na chọrọ.
Nwere ike ịnye gị ihe atụ nke ga-abụ ihe ị chọrọ, dị ka nha, ọkpụrụkpụ, ụcha, na ekweghị ekwe.
Uru ngwaahịa: 1.High okpomọkụ na-eguzogide,Obere okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ.
3. Mechie nke ọma.
4.Technology bu okenye, kwụsie ike.
5. Enwere ike ịhazi akụkụ ndị na-abụghị ọkọlọtọ.
6. Kpọmkwem size.
Amfụfụ silicone roba akara warara (mm) Fụfụ silicone roba tube (mm)
Gburugburu mmanya Ogwe ogwe Ogwe profaịlụ Dị ka mmepụta.
.2 8 × 8 Typedị P
.3 8 × 10 Angdị Triangle
φ4 10 × 10 Enwere ike ịkọwapụta nkọwa pụrụ iche na agba, ụdị dị iche iche nke ụdị dị mma.
. 14 20 × 5
Ọnụahịa ahụ bụ maka ntụnye naanị, ọnụahịa ahụ dabere na ngwaahịa a kapịrị ọnụ.
Foto nke fOam silicone ibe
Njikọ ngwaahịa nke ụfụfụ silicone ibe
Mara: 1. A na-ejikarị data niile eme ihe.
2. Akara pụrụ iche, dayameta pụrụ iche, wdg nwere ike ịhazi ya dịka
More nkọwa nke ụlọ ọrụ na anyị na, Pịa na logo n'elu iji mụtakwuo.
Ozi Companylọ Ọrụ
Jiangyin Jujie Rubber & Plastic Co., Ltd, nke e guzobere na 2007, bụ ụlọ ọrụ ọhụụ nke nwere ọkachamara na ya. rụpụta na mmepe nke silicone ngwaahịa. Anyị tumadi rụpụta elu-edu silicone hoses, silicone akara ibe na akara ọcha maka eletriki, electronic, ọkụ, ọgwụ, nri, chemical, ụgbọala, shipbuilding, na ígwè ọrụ.
1. Kedu mgbe m ga-enweta nkwupụta ahụ?
Anyị na-aguputa n’ime 24 awa mgbe anyị nwetachara ajụjụ gị. Ọ bụrụ na ị dị oke mkpa iji nweta ọnụahịa ahụ, biko kpọọ anyị ma ọ bụ gwa anyị na email gị ka anyị wee lebara ajụjụ gị anya.
2. Kedụ ka m ga - esi nweta ihe nlele iji chọpụta ogo gị?
Anyị ga-enye gị ụdịrị anyị dị maka ịlele ogo anyị, mana ọkwụrụ ụgwọ iji kwụọ ụgwọ maka gị.
Ma ọ bụ mgbe price nkwenye, i nwere ike ịchọ n'ihi n'omume na-elele anyị mma, ma sample na-eri mkpa iji kwụọ ụgwọ site ị .Ihe sample-eri nwere ike ịbụ nkwụghachi ma ọ bụrụ na gị nnukwu iji ibu-arịọ anyị.
3. Kedu maka oge ndu maka imepụta igwe?
N'ikwu eziokwu, ọ dabere na ọnụọgụ iwu na ngwaahịa ịchọrọ. N'ikwu okwu n'ozuzu, anyị na-atụ aro ka ị malite nyocha karịa otu ọnwa tupu ụbọchị ịchọrọ ị nweta ngwaahịa ahụ.
4. Gịnị bụ usoro nke nnyefe gị?
Anyị na-anabata EXW, FOB, CIF, wdg You nwere ike ịhọrọ nke kachasị adaba ma ọ bụ dị ọnụ ala maka gị.
Nke gara aga: 2020 Kacha ọhụrụ Metal egbochi ihe teepu na-agbanwe doro anya silicone roba onwe-fusing teepu
Osote: dị iche iche udi silicone ogbo foamed roba warara akàrà
multi-ọtọ emechi cell ụfụfụ silicone akara ...
kasị ewu ewu na tube udi ụfụfụ kpuchie ị ruụ ru ...
2020 Kacha ọhụrụ Silicone ogbo ọkpọkọ silicone rubb ...
Inogide elu okpomọkụ na-eguzogide gburugburu fda g ...
multi-ọtọ ala price capillary ụfụfụ silic ...
2020 ezi ahịa okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ silicone ụfụfụ tu ...
Mba 345, South Jingyang Road, Qingyang Town, Jiangyin, Wuxi, Jiangsu, China